Basanta Basnet: प्रचण्डजीसँग दुराग्रह राखेको भए पार्टी फुटाउन सक्थें।
प्रचण्डजीसँग दुराग्रह राखेको भए पार्टी फुटाउन सक्थें।
आश्विन १०, २०७२- हिजो शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी एमाओवादी र संसद सदस्य परित्याग गरेका बाबुराम भट्टराईसँग कान्तिपुरका लागि बसन्त बस्नेतले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
अकस्मात एमाओवादी त्यागको निर्णय गर्नुभयो नि?
एमाओवादी छाड्ने जानकारी पाएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो?
माओवादीका सशस्त्र युद्धमा तपाईंहरू दुई जनाको नाम चर्चामा हुन्थ्यो। अब सधैंलाई छुट्नुभएको हो?
प्रचण्डजीसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध अहिले पनि राम्रै छ। भोलि पनि मुद्दागत आधारमा हाम्रो सहकार्य हुन सक्छ।मैले दुराग्रह राखेको भए अरू साथीहरूसमेत लगेर पार्टी फुटाउन सक्थें। तर त्यसो गरिन। ममात्रै निक्लें।
दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि नयाँ शक्तिको बहस चलाउन थाल्नुभयो। अब नयाँ शक्ति बनाउने हो?
मधेसी र जनजातिलाई प्राथमिकता दिन खोज्नुभएको हो?
कम्युनिज्म छाड्नुभएको हो?
उसोभए स्टालिन र माओबाट बाहिर आउनुभएछ?
त्यो भनेको अहिले चर्चामा रहेको नवमाक्र्सवादी बाटो हो?
त्यसरी भन्नुभन्दा पनि मैले यसलाई पाँच ‘स’ को अवधारणाका रूपमा व्याख्या गर्न खोजेको छु : स्वाधानीता, समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था, समृद्धि, सामाजिक न्यायका लागि समाजवाद र सदाचार।
उसोभए अब तत्कालको मार्गचित्र के हुन्छ?
नयाँ पार्टी कहिले घोषणा हुन्छ?
मोहन वैद्य, विप्लवदेखि उपेन्द्र यादवसँग समेत कुरा भइरहेको छ?
संसद् किन छाड्नुभएको?
जुन पार्टीबाट म सभासद चुनिएँ, त्यसलाई नै त्यागेपछि नैतिक रूपमा संसद्मा रहिरहनु उचित नहुने ठानेर त्यागेको हुँ। त्यसमाथि संसद् परित्याग त स्वत: हुने व्यवस्था नै छ। अब तत्कालका लागि कुनै पदहरूमा बस्ने सोच छैन। म मूल्य मान्यताको राजनीति र देशको रूपान्तरणका लागि केन्द्रित हुनेछु।
युद्धबाट शान्तिमा आउनुभयो। एमाओवादीप्रतिको मूल्यांकन के छ?
तर तपाईंको राजीनामाले जनयुद्धको औचित्य पुष्टि भयो त?
Posted by Basanta Basnet at 7:09 AM
काठमाडौं–दिल्लीको चेपमा मधेसी माग
प्रचण्डजीसँग दुराग्रह राखेको भए पार्टी फुटाउन सक्थ...
बाबुरामद्वारा चार दशक लामो कम्युनिस्ट राजनीति अन्त...
भारतीय रिपोर्टको अल्झोमा मधेसी मुद्दा